iPhone ဓာတ်ပုံများကိုပြင်ပ hard drive သို့ Mac သုံးပြီးတင်သွင်းနည်း။ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
သင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုအရံသိမ်းဆည်းခြင်းကိုတစ်ခါမျှမသိမ်းဆည်းသောသူများထဲမှတစ် ဦး လော။ ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများ (သို့) iCloud စည်းညှိခြင်းကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ပြင်ပ hard drive တစ်ခုပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံအားလုံးကိုသင်လိုချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ရိုးရိုးအဆင့်အနည်းငယ်နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း - သင်၏ဓာတ်ပုံအားလုံးသည်ပြင်ပ disk တွင်ရှိလိမ့်မည် သင်၏ Mac ကွန်ပျူတာနှင့်စံကိုက်ညီသော application များအသုံးပြုခြင်း။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်သည်အလိုအလျှောက်ဖွင့်ခြင်းကိုပိတ်ခြင်းမရှိပါက၊ သင်၏ iPhone နှင့် iPad ကိုသင်၏ Mac ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ iPhoto ကတိုက်ရိုက်ဖွင့်သည်။ သင်၏ဓါတ်ပုံအားလုံးကိုသင်၏ကွန်ပျူတာ၏ hard drive သို့တင်ပို့လိုပါက ဆက်လက်၍ တင်သွင်းရန်ကိုနှိပ်ပါ။ သို့သော်သင်၏ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်ကိုပြင်ပ disk တွင်သိမ်းထားလိုပါက "Image Capture" application ကိုသုံးရမည်။ (၎င်းကို applications ဖိုင်တွဲမှသို့မဟုတ် Launchpad မှ)
ဆက်မလုပ်မီဤလုပ်ဆောင်မှုသည်သင့်အားနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည် ဓါတ်ပုံများကို USB မှတ်ဉာဏ်၊ မက်ဂ်၏အတွင်းပိုင်း hard disk စသည့် hard disk သို့လွှဲပြောင်းသည် ဒါပေမယ့်စတင်ကြပါစို့:
iPhone ကို Mac USB port နဲ့ချိတ်ပါ
အိုင်ဖုန်းဟာ Image Capture sidebar မှာပေါ်လာပြီးကွန်ပျူတာရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ပုံတွေအားလုံးအလိုအလျောက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ သတိရပါ WhatsApp မှရရှိသောဓာတ်ပုံများနှင့်စကရင်နှစ်ခုလုံးသည်ပေါ်လာလိမ့်မည်။.
Image Capture ၏အောက်ခြေတွင်သင်၌ရှိသည့်ဓာတ်ပုံအရေအတွက်နှင့်တင်သွင်းမည့် ဦး တည်ရာကိုဖော်ပြလိမ့်မည်
destination box ကို "Other ... " ကိုရှာပါ။ ဒီမှာပါ သင်အသုံးပြုလိုသောပြင်ပ hard drive ကိုရွေးချယ်နိုင်သောနေရာနှင့်ဓာတ်ပုံအားလုံးကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖိုင်တွဲတစ်ခုအတွင်းတင်သွင်းလိုပါက
ဦး တည်ရာကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်သင်လုပ်ရန်သာဖြစ်သည် « Import »ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသင့်ရဲ့ပုံတွေကိုမိတ္တူကူးယူပြီးသင့် iPhone နှင့် iPad အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ထဲမှသင်ဖျက်နိုင်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » Mac မှဓာတ်ပုံများကို iPhone မှ External Hard Drive သို့တင်သွင်းနည်း
သင်သည်ဓါတ်ပုံအက်ပ်ကိုဖွင့်သည်။ iPhone သည်ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ပေါ်လာပြီး iPhone မှဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ကူးခြင်းသို့မဟုတ်တင်ပို့ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်
ကောင်းတယ်၊ ငါရှာနေတာဒီဟာကအကောင်းဆုံးပါ၊ ဒီလမ်းတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး။ အရာအားလုံး ok နှင့်ငါ့ 5000 ဓာတ်ပုံများကို back up လုပ်ထားပါတယ်။
အဲဒီဓါတ်ပုံ ၅၀၀၀ ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာပို့ရမလဲ။ ငါအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေပြီးတစ်နေ့ထက်ဝက်ကျော်
ဓာတ်ပုံအက်ပ်ကို သုံး၍ သူတို့ကိုကွန်ပျူတာသို့ပြောင်းပြီး hard disk သို့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၁၂၀၀၀ ရှိ၍ မဖြစ်နိုင်သည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။
ငါဒီလိုလုပ်ကြည့်ပြီးအိုင်ဖုန်းပေါ်မှ Unblock ကိုမြင်သော image capture app တွင်ကျွန်တော် ဆက်၍ မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
ကောင်းတဲ့အစွန်အဖျား! အစာရှောင်ခြင်း ပြင်ပ hard drive များသို့အရန်ကူးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Mac Photos အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုကွန်ပျူတာသို့တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနေရာပိုလိုအပ်သည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။
ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအံ့သြနေခဲ့ကြရတယ်။ အင်ဖိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကကျွန်မကိုလုံးလုံးလျားလျားဝတ်ပြုခဲ့တယ်
သူကကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပြင်ပ hard drive ကိုထားပါက၎င်းကိုကွန်ပျူတာသို့ပို့ပါသည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ကျွန်ုပ်သည်ဓာတ်ပုံများမှမည်သည့်အခါမျှအလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ် (၀ င်းဒိုးတစ်ခုကိုပုံမှန်ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ) သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်စေကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံ ၁၈၀၀၀ ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်က Mac နဲ့ Iphone တို့နဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်နေခဲ့ဖူးပေမယ့်ဓာတ်ပုံအကြောင်းအရာကကျွန်တော့်ကိုတွန်းလှန်နေတုန်းပါ။ ကျနော့်ကိစ္စအတွက်အရမ်းအထောက်အကူပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်အရ!
ငါဖုန်းကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာငါ့မှာပစ္စည်း ၁၉၀၀ ရှိတယ်လို့ပြောတယ်၊ တကယ်တော့ငါ့မှာ ၆၀၀၀ ရှိတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာငါဒီလွှဲပြောင်းလုပ်ဖို့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာနေကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ကျွန်ုပ်၏ Mac ရှိ Photos APP ကိုဖြတ်သန်းစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်နေရာလွတ်ချနိုင်သည်။